Afuufa wax taaj oo kale Machine. Shayga ka dhergin GB13508-92, SN04499.2-95 looga baahan yahay.
Mashiinka wax taaj oo kale dhabar jab 220L
1. SOO SAARKA
SKJ 220L Full caaga si toos ah mashiinka wax taaj oo kale dhabar jab
nidaamka xakamaynta dhumucdiisuna MOOG;
habka wax taaj oo kale afuufa
Dur wax ka dhiman madaxa-jab-taaj-saarka
I. Xaaladda Working
Bridge ≥9m height wiish
10cm Plant aasaaska ≥10cm la taaban karo
La fogaado duurka sixir
degree qoyaan ≤90%
heerkulka gudaha 0-45 ℃
3-waji 4 fiilooyin 50Hz, 380V-415V
heer-kulka biyaha ≤20 ℃
≥0.3Mpa cadaadiska biyaha
50T isticmaalka Biyaha / H
il Air 0.8Mpa cadaadis
cadaadiska hawada alaabta la xirrira 0.2-0.4 MPA
madaxa Machine dhinta
25L nooca accumulator madaxa u dhintaan.
Unit ku tirtirayaan
3 gogo 'nooca tirtirayaan unit 2 baararka jiido
jir mashiinka la wiishka
Mashiinka quudinta Laba Spring ama mashiinka quudinta hawada
kursiga dharbaaxo multifunction
robot hagaajin karo
Howlsocodsiinta Delta unit Haydarooliga muhiimsan iyo Wall gacanta dhumucdiisuna unit yar Haydarooliga
nidaamka xakamaynta pneumatic
Siemens PLC nidaamka korontada
229,5 kw, Total load 125kw 229,5 kw with125 isticmaalka celcelis
Aragti Machine (L x W x H)
300 kgs / Saacadda
1 ilaa 2
III. Details Technical
Ku marooji oo foosto
Ku marooji Ballaca
Ku marooji L / D
Ku marooji Waxyaabaha
Wadista Motors iyo Inverter
Oogada adag iyo qalbi engegnaantooda
Unit Qaboojinta Biyaha
Iskubedelka kulayl diwaangaliyay
Tuur giraanta aluminium kululaynta
Qaboojinta tuuboyinka Design
Iyada oo kala cayncayn ah, nadiif ah oo aan xiri doonaa jidka.
Foosto zone kululaynta la cover iyo taageere qaboojinta, zone quudinta la unit qaboojinta biyaha
3-2. madaxa Machine dhinta
38CrMoAl & 45 # steel
godka dhulka qarqinaya
kooxda Jaha godka dhulka qarqinaya
Waxyaabaha Riixista oo dhumucdiisuna Control dhululubada
2-in-1 dhululubo waayo wax u riixaya oo gacanta ku dhumucdiisuna
unit gacanta ku heerkulka saliidda
saxanka biyaha-qaboojiyey, hoos u ah ee heerkulka, dhululubo hayo heerkulka wanaagsan ka shaqeeya
Die Pin iyo Core Pin
giraanta High kululaynta dhoobada hufan
3-3. Unit ku tirtirayaan
Multi-xigta template fur, fududahay in aanan qamaar
Maalintii u dhaxaysa Platens
45 # steel & steel A3
Force ku tirtirayaan
Unit beddelo caaryada
3-4. Meegaarka Machine iyo Imaansho
2nd Floor Platform wiishka
Machine Protective Cover iyo biraha
3-5. nidaamka quudinta wax
unit model quudinta Spring, Waxaa gudbin karaan noocyo kala duwan oo qalab uma baahna filter
3-6. kursiga afuufa
kursiga dharbaaxo Five function
500MM.Five hawlaha: kacday hawada iyo daal, wax quwad, wax iskala, kor iyo hoos, dhululubo qabsato kala duwan 500MM, meel siman qabsado
Function: hore u socda / dib, u dhow oo furan, qaboojinta biyaha, height qabsado.
3-8. nidaamka Haydarooliga
Dhoobo-up sysytem Haydarooliga
40% Delta Delta Howlsocodsiinta station.1 Haydarooliga. waqtiga jawaabta nidaamka Haydarooliga gaaban, 2. hydrauilc cadaadis kordhay si deg deg ah, 3, wax badbaadinayaa in ka badan 40%
bamka Big & unit waalka
Size Haanta Oil
heerkulka Low nidaamka Howlsocodsiinta
Delta Howlsocodsiinta motor
Bamka & Madax
unit Wall gacanta dhumucdiisuna
Howlsocodsiinta gacanta ku biiyaha
Device Kaydinta Cadaadis
Shiinaha brand caan
3-9. nidaamka Pneumatic
filtarka pneumatic ku jira saldhiga isla, ku haboon hagaajin iyo hawlgalka.
SMC SMC iyo brand top Chinese
Multi Operating Language Screen
luqadda maxalliga ah + Chinese Ingiriisi + Macaamiisha ee
Contactor iyo fara baxsadeen
Danab Low Qaybo Kale Electronic
Control Heerkulka Program
Wareegaayo ugu sarreysa iyo Progressive Kul-Habka
PLC kululaynta Intelligent si loo yareeyo isticmaalka tamarta
Kulaylinta gacanta by sii buurayn
Buurayn Schneider Sida ay xaaladda dhabta ah. Haddii qofka macaamiisha ah waa kala duwan heerkulka sare, waxaan u isticmaali doonaa contactor.Because AC ah sii buurayn ee deegaanka heerkulka sare waa u fududahay in ay dhaawac.
Wall gacanta dhumucdiisuna
Dhidibka oo dhumucdiisuna waxay jihada controllor
MOOG 200 dhibcood
Brand TOP China
DICHTOMATIK GERMANY ama Dhuxul Daba Taiwan
HIWIN Taiwan AMA maskaxda Taiwan
Buyer in warshad iibiyaha ee tababar, oo ay ku jiraan hawlgalka mashiinka, dayactirka iyo hagaajinta fudud diraan yaabaa wadayaasha ah;
Or ka dhanka ah codsiyada iibsadaa, farsamo iibiyaha ayaa tababar yaabaa shaqeeya iibsadaha ee warshad iibsadaha ee muddooyinka ka mid ah rakibidda & qabsado,
Waxbarashadu waa lacag la'aan;
iibiyaha The diraan yaabaa injineer ka dhanka ah codsiyada iibsadaa si loo soo dajiyo iyo qabsato mishiinnada muddo hal todobaad ah in warshad iibsadaha ee.
Helana waa in boos ka hor ka hor dhalmada ee mashiinada ah;
Iibsadaa waa in lagu bixiyo kharashka injineer ee codsiga fiisaha, tigidhada hawada ku wareegsan, cunto & guddiga ka hor inta uu baxay;
mar damaanad waa hal sano ka dib mashiinada sida caadiga ah ka shaqeeyaa warshad iibsadaha ee, haddii oo kaliya dhibaatada waa sababta ay sabab u tahay tayada ama sabab kasta oo ay iibiyaha. Waxaan sahayda bedeli doona qaybo ka oo lacag la'aan ah iyo injineerada our idinku wadi doonaa sida si ay u xaliyaan dhibaatooyinka.
Previous: Mashiinka wax taaj oo kale dhabar jab 20-50L
Next: Mashiinka wax taaj oo kale dhabar jab 50-100L
20 Litre Chemical Drum Machine Samaynta
2000 Litre Machine wax taaj oo kale afuufa
220 Litre caaga Drum afuufa wax taaj oo kale Machine
Afuufa wax taaj oo kale Machines
Chemical Drum wax taaj oo kale afuufa Machine
Double Ring Chemical Haanta afuufa
Factory Price Machine wax taaj oo kale afuufa
Caaga Sea Ball wax taaj oo kale afuufa Machine